Amaxabiso oMqeshi kunye neeMpawu-OutBüro
I-OutBüro yeyomqeshi ngamnye, nokuba ithini na indawo esemthethweni, ubungakanani, okanye indawo emhlabeni-naphina apho i-intanethi yomhlaba ixhunyiwe khona, ngenxa yoko siyakwazi ukwenza izicwangciso ukuba unxibelelwano lukhona. Ke, unokuba yinzuzo, ungenzi nzuzo, i-B-Corp, iqumrhu likarhulumente, ikomiti yezenzo zopolitiko (PAC), ngokwenene sikhathalele ukuba ubakhathalele abasebenzi bakho, iikontraki, abafundi abasafundayo, amavolontiya, kunye nabani na osebenzela umbutho wakho nakwesiphi na isikhundla kunye nabathengi bakho kunye noluntu.
Qaphela ukuba onke amanqanaba amalunga neempawu, kwaye olu ayilo luhlu olupheleleyo. Siyakwazi wena, iinjongo zakho kwaye emva koko sinikezele ngesindululo esikhethekileyo kuwe. Ukuba ungumbutho wama-50 kodwa ufuna ukuya kubaphangi, masenze njalo.
Ukunikela ubhedu isilivere igolide platinum
Umqeshi wokuPhawula ukuThengisa Y Y Y Y
IQela leNkxaso elizinikeleyo Y Y Y Y
Amanqaku omqeshi Y Y Y Y
Ukudibana ne-PR kunye noKhuthazo lweNtlalo Y Y Y Y
host Imithombo yabasebenzi Iqela kwi-OutBüro? Y Y Y Y
Iwijethi enokufakelwa nge-Live OutBüro ireyithingi? Y Y Y Y
Inqaku leendaba le-E Y Y Y
Umqeshi weSiza enomdla kuMsebenzi woMsinga-kwi-OutBüro nakwiinethiwekhi zethu Y Y
Idilesi ye-imeyile ezinikeleyo Y Y
Umqeshi we-OutBüro Uphawu lwesiqendu Y Y
Uluhlu lwabathengi luqukiwe Y Y
Uphawu lweWebhu Y
Umqeshwa kunye / okanye iziqendu zabaThengi- i-OutBüro ikhokele kudliwanondlebe / nengxoxo 1 3+
I-OutBüro's LinkedIn Group Post Ingcebiso 1+
Ukujoliswa kwamanani abaThengi beSiza kunye / okanye iNkulumbuso Y
Ithuba lokudweliswa kwiiDili eziNikezelweyo Y Y Y Y
Abantu abagunyazisiweyo ababizwa ngama-HR kwii-OutBüro's LinkedIn iqela 1 1 2 4+
Ukuthunyelwa kukaJob kokungenisa ngokuzenzekelayo-Ngaphantsi kwePlatnum kukhetho
(ngeXML feed) kwiiCareers.Outburo.com Y
Indawo yokuHlola abaSebenzi kwiOutburo.com Y Y Y Y
IiAkhawunti zabaQokeleli kwiMisebenzi.Outburo.com 1 1 1 2+
Ukukhangela ukuKhangela kwakhona kwiNyanga kwiNyanga emiSebenzi Y Y
*IiFair Career Fairs zibandakanywa rhoqo ngonyaka 1 2
*IiFair Supplier Virtual zibandakanyiwe rhoqo ngonyaka 1 2
OutBüro wonke umqeshwa ongaziwa ngovavanyo lwedijithali- olubanzi lwe-DEI kubandakanya LGBTImiba namava e-Q ngonyaka Y
* Iimpawu zamanqaku kwimisebenzi kwaye ziya kufumaneka njengoko abaqeshi bengena ngaphakathi ukuxhasa inkxaso eyongezelelweyo.
Qala iTril Yakho yasimahla yeentsuku ezingama-45
Ishedyuli ye-30-Min Intshayelelo Incoko
Nika ulwazi oluthile ngengxoxo eneenkcukacha
Indlela yamaxabiso ngokubanzi
Nceda uyazi ukuba esi sisongezo esiphezulu senqanaba eliphezulu. Singathanda ukuba nencoko nawe ukuze uyiqonde ngcono impumelelo yakho ukuza kuthi ga ngoku, umzabalazo wakho wangoku, kunye neenjongo zakho. Sifuna ukusebenzisana nawe ukufezekisa amanqanaba amangalisayo okuqaqamba okuqaqambileyo.
I-OutBüro ngokubanzi inexabiso ngokusekwe kwinani lilonke labasebenzi abakwiziko elisemthethweni kunye noqoqosho lwesikali- ixabiso elithetha ukuba umsebenzi ngamnye liyancipha njengoko umbutho umkhulu.
Ngenxa yokuba umbutho ngamnye wahlukile, unemiceli mngeni eyahlukeneyo, inkqubela phambili okanye ukusilela kwawo, amathuba, iinjongo, kunye nohlahlo-lwabiwo mali, amaxabiso ethu sisikhokelo esisisiseko kunye neenkonzo ze-bespoke ngokuzikhethela ezinamanqanaba ahlukeneyo okubandakanyeka kwiqela lethu kunye / okanye ingxelo ethe ngqo kwiikontraki ezincinci.
Akuboneleli nge-OutBüro kuphela kubasebenzi bakho, uyenza ifumaneke kubo bonke abasebenzisi.
Ukongeza, ukuthatha kwakho inxaxheba kwenza ukuba i-OutBüro ixhase uluntu olungenzi nzuzo.